गच्छदारलाई उपसभापति बनाईएपछी देउवालाई प्रकाशमानको यस्तो चेतावनी !::Hamrodamak.com
गच्छदारलाई उपसभापति बनाईएपछी देउवालाई प्रकाशमानको यस्तो चेतावनी !
नेपाली कांग्रेसमा पार्टी उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनीत गर्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा पार्टी उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनीत गर्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन ।
नेता सिंहले पार्टी विधानको प्रावधानविपरीत सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिंहले सभापति देउवाले अप्रजातान्त्रिक ढंगले गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका हुन् ।
नेता सिंहले सभापति देउवालाई पार्टीलाई विधि र विधानसम्मत ढंगले अघि बढाउन पनि चेतावनी दिएका छन्। आफूसँग बहुमत छ भन्दैमा सभापति देउवाले जथाभावी गर्दै हिँडेको नेता सिंहको आरोप छ।मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गरेको थियो।